आफ्नो खुसी कहाँ छ भनी भौतारिएका सुरज रावल भगवानको शरणमा ।।
केशब भट्ट , रेडियो बेलौरी, कञ्चनपुर, १३ माघ ।
आफ्नो खुसी कहाँ छ भनी भौतारिएका सुरज रावल भगवानको शरणमा पुग्नुभएको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी घर भई नेपाल प्रहरीका कार्यरत सुरजले आफ्नो सांगितिक यात्रामा नयाँ आयाम थप्न भगवानको शरणमा पुगी हे भगवान नामक लोकदोहरी एल्बम बजारमा ल्याउनुभएको छ । छोटो समयमा करीब २ दर्जनभन्दा बढी आधुनिक तथा लोकदोहरीमा अभिनय गरेको र भर्खरै बजारमा उपलब्ध लोकदोहरी एल्बम हे भगवानमा स्वर सुर्य खड्का र मुना थापा मगरको रहेको छ । स्मृती तिमेल्सेनाले निर्देशन गरेको उक्त एल्बममा अभिनय सुरज रावल र सुस्मीता सापकोटाको रहेको छ । उक्त एल्बम सङ्गै अर्काे आधुनिक एल्बम सुनको महल र लोकदोहरी एल्बम सेतो लास लगत्तै सार्वजनिक हुने मोडल सुरज रावलले बताउनु भयो ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नं. ४, शान्तिपुर जन्मनु भएका सुरज रावल विगत २ वर्ष यता मोडलिङमा चर्चा कमाउँदै आउनु भएको छ । बिछोडको पीडा लोकदोहरी गीतबाट मोडलिङ यात्रा सुरु गर्नुभएका रावलले आजसम्म २ दर्जन भन्दा बढी गीतहरुमा मोडलिङ गरिसक्नु भएको छ । बेलौरीको शान्तिपुरमा रहेको शान्ति मा.वि. बाट एसएलसी उत्तीर्ण गरी तत्कालिन महाकाली उच्च माविबाट प्लस टु उत्तीर्ण गर्नुभएका रावल पेशाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत रहनुभएको छ ।
एकातिर नेपाल प्रहरीको जागीरे र अर्कोतिर मोडलिङ गर्ने रहर कताकता आफुलाई नमिल्दो लागेपनि समय मिलाएर दुवैतिरको जिम्मेवारी पूरा गरेको सुरज रावलको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “ कहिलेकाही समय अभावका कारणले राम्रो अवसर गुमेको छ ।” छोटो समयमा धेरै दर्शकहरुको मन जित्न सफल सुरज रावल दर्शक र श्रोतावर्गलाई भगवान सरह ठान्दै माया, साथ हौसला र सद्भावले नै सफलताको खुड्किलो चढिरहेको बताउनुहुन्छ । आफुलाई प्रेरणा दिनुहुने सबै आफन्त, परिवार, साथीसंगी र शुभचिन्तकहरुमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्नु भएको छ ।